‘चङ्गाचेट’ भदौ १५ देखि
Posted: 2018-06-09 06:07:00
‘चङ्गाचेट’ भदौ १५ देखि बजारमा आउने भएको छ । चलचित्र ‘चङ्गाचेट’का निर्माता माधव वाग्ले नक्कली नोट प्रकरणमा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । उनको बिषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । वाग्लेको बिषयमा अदालतले अन्तिम फैसला गरेको छैन । केही दिनमै फैसला आउने वुझिएको छ ।
बाग्लेले निर्माण गरेको चलचित्र ‘चङ्गाचेट’को प्रदर्शन मिति भने तय गरिएको छ । यो चलचित्र अब भदौ १५ मा रिलिज हुने पक्का भएको छ । यो मितिमा यसअगाडि चलचित्र ‘ब्रेकअप’ रिलिज गर्ने चर्चा थियो । संभवत यो मितिमा अब ‘ब्रेकअप’ आउनेछैन ।
हस्तमैथुनुका फाइदै फाइदा, यी हुन् ७ प्रमूख फाइदा
Posted: 2018-07-17 07:42:03
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ - यौन मानव जीवनमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय हो । यौन जीवन सामान्यतया हाम्रो समाजमा विवाह पछि मात्रै सुरु हुन्छ । तर त्यो भन्दा पहिला पनि युवा युवतीमा यौन इच्छा हुन्छ । विशेषगरी किशोराबस्थामा शारीरिक सम्पर्क राख्ने चाहना बढी हुन्छ । त्यो समयमा युवा युवतीले अपनाउने भनेको हस्तमैथुन हो । ...
यौनसम्बन्ध राख्न नमान्दा फिल्म गुम्यो यी नायिकाको
Posted: 2018-07-17 07:35:24
सुनाखरी न्युज/ मुम्बई बलिउडकी सेक्सी नायिका मल्लिका सेरावत उमेर बढेसँगै ओझेलमा परेकी छिन् । लामो समयदेखि उनले कुनै फिल्म पाएकी छैनन् । मल्लिकाले ‘मर्डर’बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । पहिलो फिल्ममा हट सिन दिएकी मल्लिकालाई त्यसपछि पनि यस्तै सिनका लागि अफर आउन थाले । उनले केही फिल्म गरिन् । त्यसपछि उनको छवि नै बिग्रियो ।...
‘वुमन अन टप’ खतरनाक सेक्स पोजिसन
Posted: 2018-07-14 09:50:05
सुनाखरी न्युज/ एजेन्सी -मानिसहरु विभिन्न स्टाइलमा सम्भोग गर्न मन पराउँछन् । तर, एक अध्ययनअनुसार पुरुषमाथि महिला रहेर गरिने (वुमन अन टप) सम्भोग सबैभन्दा खतरनाक सेक्स पोजिसन रहेको पाइएको छ । क्यानडाका अनुसन्धानकर्ताहरुले आधाभन्दा बढी लिंगको फ्र्याक्चर यस्तो सम्भोग पोजिसनका कारण भएको पत्ता लगाएका थिए । यस्तै, अर्को पोजिसन ‘डग्गी स्टाइल’ का कारण २९ प्रतिशतमा लिंगको फ्र्याक्चर हुने समस्या देखिएको छ ।...
वोवी यसैसाता, ‘प्रेम गर्नेहरूले हेर्नै पर्ने के छ त्यस्तो ?
Posted: 2018-07-14 09:22:17
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — बायोपिक प्राय सेलेब्रिटी वा प्रतिष्ठित व्यक्तिका लेखिन्छन्, बनाइन्छन् । सर्वसाधारणका कथा उनीहरूसँगै मरेर जान्छन् । कहानी सर्वसाधारणका सामान्य नै हुन्छन् भन्ने त हैन तर त्यसमा जनचासो नहुने डर हुन्छ । कतै यस्तै डर निर्देशक मिलन चाम्सलाई पनि त छैन ? यसै साता रिलिज हुने ‘बोबी’ मा ललितपुरका उमेश थापा र पोखराकी कविता गुरुङबीचको लभस्टोरीलाई उठाइएको छ ।...
विश्वकपले गरायो डिभोर्स, श्रीमतीले मेस्सीभन्दा रोनाल्डो रोजेपछि श्रीमानले दिए डिभोर्स !
Posted: 2018-07-14 07:05:48
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डोका कारण विवाह गरेको १४ वर्षपछि एक जोडीको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । विश्वकप फुटबलका बेला मेस्सीको खेल नराम्रो भनेर आलोचना गरेपछि रसियामा ४० वर्षका आर्सेनले ३७ वर्षकी श्रीमती लिउडमिलासँग सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । खेल मन पराउने उनीहरु दुवै जनाको भेट पनि विश्वकपकै बेला भएको थियो ।...